Iindaba - Amanqaku endlela yokusebenzisa itape yokunkcenkceshela yokunkcenkceshela!
Amanqaku endlela yokusebenzisa itape yokunkcenkceshela yokunkcenkceshela!
1.Xa iteyiphu yokunkcenkceshela isetyenziswa phantsi kwefilimu yezolimo, ngenxa yokukhanya kwelanga, amanzi aphezu komhlaba aya kunyuka abe ngumphunga, kwaye iya kudibana kumathontsi amancinci amanzi kwifilimu yezolimo. La mathontsi amancinci amanzi aya kwenza ilensi. Phantsi komgama ofanelekileyo kunye nokukhanya kwelanga, amathontsi amanzi Ukugxila kwelensi kuya kwenza indawo eshushu, eya kuthi itshise itape okanye idle umngxunya omncinci. Ukuthintela olu hlobo lwengxaki ukuba lungenzeki, kufuneka kuthathwe la manyathelo alandelayo xa usebenzisa:
Sebenzisa ifilimu emnyama ye-mulch, ifilimu ye-mulch emnyama yeyona ilungileyo, ukuba usebenzisa ifilimu ye-mulch esekuhleni, kuya kufuneka ungcwabe iteyipu yedrophu ngokungagungqiyo okanye ugqume i-mulch ngomaleko omncinci womhlaba ukuthintela ukukhanya okuqinileyo ekungeneni kwifilimu ye-mulch.
Xa usebenzisa, gcina umgangatho womhlaba kangangoko kunokwenzeka, kwaye usebenzise umlinganiselo ofanelekileyo weyeza lokubulala iintsholongwane phambi kokutyala ukuthintela ukhula ekukhuleni okanye iibhloko zomhlaba ekubambeni isigcina-kufuma, kubangele umphunga wamanzi uqokelele kwisigcina-kufuma kunye yenza amaconsi amancinci amanzi.
2. Izinambuzane ezitshabalalisayo kufuneka zitshizwe ngomthamo ofanelekileyo wokubulala izinambuzane xa izilimo zikhula, kwaye izibulali zinambuzane kufuneka zibulawe kwangexesha ukuthintela izityalo kwaye kunkcenkceshelwe amabhanti okunkcenkceshela ekulunyweni nasekonakaleni.
3. Xa iteyiphu yokunkcenkceshela igcinwe ngoomatshini, kunyanzelekile ukuthintela iteyiphu yokunkcenkceshela ukuba ingakhukuliseki kwaye ixinaniswe ngoomatshini.
4. Xa ubeka iteyiphu yokunkcenkceshela yokunkcenkceshela, icala eline-dripper kufuneka lijonge phezulu, kwaye amandla kufuneka abe ngokufanayo xa woluliwe, kwaye iteyiphu yokunkcenkceshela yedriphu kufuneka igcinwe ngokuthe tye.
5. Imisebenzi yokulima ngomatshini ayivumelekanga ebaleni, kwaye akuvumelekanga ngoomatshini kunye nemfuyo ukutyumza okanye ukunyathela ibhanti yokunkcenkceshela.
6. Amanzi onkcenkceshelo edriphu angena kwibhanti yokunkcenkceshela yedriphu kufuneka ilungiswe ngenkqubo yecebo lokucoca elingaphezulu kwe-100 mesh.